आयल निगमको साढे ३० करोड रोहिणी खोलामा, पैसा कर्मचारी र नेताको झोलामा
साउन ३, २०७४ नरेश केसी
भैरहवा, २ साउन । मुलुकका ७ वटै प्रदेशमा तेल भण्डारण गर्ने ध्ययले नेपाल आयल निगमले बोलपत्र आहवन गर्यो । त्यसैअनुसार २०७३ मंसिर २९ गते ५ नम्बर प्रदेशकोलागी रुपन्देहीमा जग्गा चाहिएको भन्दै बोलपत्र जारी भयो । बोलपत्रमा जग्गाको विवरण क्षेत्रको रुपमा रुपन्देही जिल्लाको नेपाल भारत सीमा बेलहिया भन्सारदेखी ५ किलोमिटर पछि भैरहवा परासी सडकखण्डको १६ किलोमिट...
स्थानिय तहमा समायोजनका लागि बनेको कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ मा ट्रेड युनियन तगारो
साउन ३, २०७४ Annapurna
काठमाडौं : केन्द्रमा रहेका कर्मचारीलाई स्थानिय तहमा समायोजनका लागि बनेको कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ ट्रेड युनियनको माग बमोजिम संशोधन हुने देखिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा सेवा प्रवाहका लागि यो विधेयक तयार गरेको हो । तर विधेयक निर्माणमा आफ्नो प्रतिनिधित्वका साथै मागहरू पनि सम्बोधन नभएको भन्दै निजामति कर्मचारी...
साउन ३, २०७४ रासस
चितवन, ३ साउन । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको जलवीरेमा आज बिहान खसेको पहिरो पन्छाएपछि सवारी आवागमन सञ्चालनमा आएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनले दिएको जानकारीअनुसार बिहान ४ः३० बजे खसेको पहिरो पन्छाएर ६ः३० बजेदेखि सवारी आवागमन सञ्चालन गरिएको हो । रातको समयमा सो सडक बन्द गरिँदै आएको छ । बिहान ४ बजेदेखि सडक खुल्ने भएपनि ४ः३० बजे पहिरो खसेर ...
साउन २, २०७४ Maniratna Bhandari
२ साउन । नेकपा (एमाले) ले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता एवं स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्बाङले आज प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवलाई भेटी सो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । एमालेले नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन २०७४...
भरतपुर मुद्दाको सुनुवाइ ६ दिनका लागि रोकियो
काठमाडौं, साउन २ – भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ मा पुन मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारेमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाई ६ दिनका लागि रोकिएको छ । सोमबार ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा सुनुवाई सुरु भए पनि कानून व्यवसायीको बहस नसकिएकाले यो मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा परेको छ । हेर्दा हेर्दैमा परेको मुद्दामा भोलिपल्टै सुनु...
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराईन । शीतलनिवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा आज आयोजना गरिएको विशेष समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराईन।सो समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभ...
के होला आज भरतपुर फैसला ?
साउन २, २०७४ Butwal Post
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । आइतबार मात्र प्रधानन्यायाधिश पाएको सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ को फैसला गर्न सेकेको छैन । यसअघि पटकपटक बाहना बनाएर फैसला सार्ने काम भइरहेको थियो । विभिन्न बाहना पटकपटक इजलास सारेपनि आज तोकिएको इजलास अघि बढ्ने सबैले विश्वास गरेका छन् । प्रधानन्यायायधिशमा गोप...
साउन १, २०७४ अमृत गिरी
१० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार नगदमा गर्दै हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने आजदेखि नगदमा गर्न पाइँदैन !
साउन १, २०७४ Maniratna Bhandari
श्रावण १, २०७४- तपार्इं कुनै ठूलो आर्थिक कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने आजदेखि नगदमा गर्न पाइँदैन ! १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने नगदमा नगर्नूस् । नगदमा कारोबार गरेको भेटिए तपाईंलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ अनुसार कारबाही हुन सक्छ । ‘१० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नुछ भने...
कर फर्छ्योटबारे पूर्व कामु महालेखा परीक्षकको टिप्पणी : ‘असल नियतको कामै होइन’
असार ३१, २०७४ Butwal Post
असार ३१, २०७४- आयकर ऐन २०३१ मा राजस्व प्रशासनबाट कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था थियो । त्यो ऐनले निर्दिष्ट गरेको राजस्व कर प्रणाली अनुसार नै २०३३ सालमा कर फछ्र्योट ऐन जारी भएको थियो । आयकर ऐन– २०५८ जारी भएपछि करदाता स्वयंले आफ्नो कर घोषणा गर्नुपर्ने मान्यता अंगिकार गरियो । हालको कर प्रणालीले करदाता स्वयंलाई कर निर्धारण गर्नसक्ने सुविधा प्रदान गरेक...